शुक्रबार, ०५ कार्तिक २०७८, ०६ : ३२
‘ब्रिटिस लाहुरे बन्न तीन चोटि प्रयास गरेँ, भइनँ’
कबड्डीको ह्याङओभरबाट किन निस्कनु त नि ? तपाईं आफैँ भन्नुस् न ! बल्लबल्ल एउटा फिल्म बनाएको छु, आफूलाई चिनाउने खालको। त्यहीँबाट निस्किएपछि त म कहाँ म रहेँ र !
'मुखै पच्किने गरी खाइयाे!'
भन्दा गफ लगाएजस्तो हुन्छ तर मेरो खेलाडी बन्नुको कारण अरुको जस्तो छैन। सानोमा म निकै मोटी थिएँ। तपाईं आफैँ अनुमान लगाउनुस् न, आठ वर्षको उमेरमा पचास केजी भनेको कत्रो होला १ मलाई स्कुलमा सबैले हात्ती भनेर बोलाउँथे।
अमित चन्द्र आर्य र सनम मुलगुठी बडिबिल्डर हुन्। अमित सन् २०१७ मा भएको मिस्टर काठमाडौँ र मिस्टर भ्याली प्रतियोगिताको गोल्ड मेडलिस्ट हुन्। त्यस्तै मिस्टर भक्तपुर २०१८ को गोल्डमेडालिस्ट हुन् भने सनम २०१८ मा भएको मिस्टर भक्तपुरको महिला तर्फको गोल्ड मेडलिस्ट हुन्।
मैले पनि खासमा मिडियाबाटै थाहा पाएँ। इस्यु त राम्रो हो तर केही अमर्यादित शब्द बोलिन्। पब्लिक फिगर भएपछि यस्ता शब्द बोल्न हुँदैनथ्यो। सुरुमा छोरीले कसरी त्यस्तो शब्द बोल्ने अवस्थामा पुगी भन्ने मनमा आयो।
नयाँ पुस्ताकी कलाकारमा आशालाग्दो अनुहारमध्येमा रेबिका गुरुङ पनि एक हुन्। विज्ञापन मोडलिङ हुँदै अभिनयतर्फ आकर्षित उनले बेलायती भिसा नपाएपछि डेब्यु फिल्म ‘लिलिबिली’ छुट्यो। ‘मारुनी’मा आफ्नो कौशल देखाउन सफल उनले हालै ‘म’मा अभिनय गरेकी छन्।
‘माया–प्रेममा पर्ने नो चान्स’
हेर्दा फुच्ची देखिए पनि निमा तामाङ बाउन्सर हुन्। एक वर्ष भयो उनी यो पेशामा लागेको। दरबारमार्गकोे लिक्विड लाउन्ज एन्ड बारमा कार्यरत उनी करातेकी ब्ल्याकबेल्ट पनि हुन्। बाउन्सर इन्चार्ज रहेकी उनीसँग कुटाई खाएकोदेखि अरुलाई कुटेकासम्म टन्नै अनुभव रहेछ।
‘गुमनाम भइएला कि भन्ने डर लाग्छ’
हस्कि स्वर भए पनि त्यत्ति चर्चामा थिएनन् आरिफ राउफ। पाश्र्व गायनमा प्रवेश गरिसकेका उनी सानो घेराबीच मात्रै परिचित थिए। जब गायनसम्बन्धी रियालिटी सो भ्वाइस अफ नेपाल सिजन २ मा सहभागी भए, उनले टन्न प्रशंसक कमाए।
‘कलाकारमा त यस्तो राजनीति छ, देशमा कस्तो होला !’
खासमा निर्देशक समाजको काम फिल्म निर्देशकका समस्या, तिनको हकहितमा आवाज उठाउने, निर्देशकहरुको वृत्ति विकासमा भूमिका खेल्ने हो तर यी तीन वर्षमा त्यसमा थोरै पनि काम भएन।
समाज भनेको सम्बन्ध हो। संविधान दस्तावेज हो। यसले समाजमा तात्विक फरक पार्दैन। चुनावपछि स्थानीय सरकारले गर्दा पहिले सिफारिस बनाउनुपर्दा सचिव खोज्दै सदुरमुकाम पुग्नुपथ्र्याे।
पत्रपत्रिकामा यौन मनोविज्ञानमा आधारित रहेर कथा लेखिरहेकी मुना चौधरी यसपटक उपन्याससहित पाठकमाझ आइन्। तराईका दलित मुसहर समुदायलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर उनले लेखेको उपन्यास ‘दुलारी’ उनको दोस्रो उपन्यास हो। शिक्षण पेसामा आबद्ध उनले यसअघि ‘जयवद्र्धन सलहेश’ उपन्यास लेखेकी थिइन्।
अभिनयकै कारण चिनिएकी कलाकार हुन्, केनिपा सिंह। छोटो समयमै उनले नाटक अनि फिल्मको दर्शकबाट आफ्नो अभिनयको प्रशंसा बटुल्दै आएकी छन्। दुई दर्जन नाटकमा अभिनय गरिसकेकी उनले पछिल्लो पटक फिल्म ‘साइँली’मा पनि अभिनय गरिन्।
बलात्कारी खुलेआम, गायक चाहिँ हिरासतमा ?
अहिले परालको आगो हुन्छ नि, स्वाट्ट सल्केपछि एकैछिनमा सकिने, हो त्यस्तै खालका गीतको बाढी आइरहेको छ। पहिलेका गीतहरु कालझैं हुन्थ्यो। नारायण गोपालका गीतहरु अझै लोकप्रिय छन् तर अहिलेका गीत यो साल सुन्यो अर्को साल सुन्नै मन नलाग्ने हुन्छन्।
‘बिहेको प्रस्तावलाई नो भनिदिएँ’
पूर्व मिस नेपाल २०१७ निकिता चाण्डक अहिले हिरोइन बन्ने दौडमा छिन्। पहिलो फिल्म ‘रानीमहल’ निर्माण हुँदै गर्दा बीचमै रोकिएपछि उनको हिरोइन बन्ने सपना पूरा हुन सकेन। अहिले विराज भट्टसँग ‘साङ्लो’मार्फत् पर्दामा देखिने तयारीमा छिन्। फिल्म निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। पहिलो फिल्मबाट उनी आशावादी देखिन्छन्।
‘डान्समा स्वस्तिमा भन्दा प्रियंका राम्रो’
अहिलेको व्यस्त कोरियोग्राफर हुन्, कविराज गहतराजले छोटो समयमै ६ सय भन्दा बढी गीतमा कोरियोग्राफी गरिसकेका छन्। अहिले सर्वाधिक हिट गीत ‘कुटुमा कुटु’, ‘गाला रातै’, ‘सिम्पल सिम्पल कान्छीको’, ‘बट स्लोली’, ‘घण्टी बज्यो’, ‘भिजिट भिसामा’, ‘पहिलो नम्बरमा’ जस्ता हिट गीतलाई उनले नै कोरियोग्राफी गरेका हुन्।